Mogadishu Journal » War ka soo baxay guddi ay dowladda Soomaaliya u saartay howlaha Xajka
War ka soo baxay guddi ay dowladda Soomaaliya u saartay howlaha Xajka
Mjournal :-Guddigaan oo ay dhawaan Magacaawday Xukuumadda Soomaaliya si ay Go’aan uga gaaraan shirkadaha u tartamaya Xujeyda Soomaalida ee Sanadkaan iyo qiimaha Xajka sanadkaan ayaa soo gudbiyey go’aanadooda.
Suldaan Cabdi Qani Qorane oo ka mid ah xubnaha Guddiga oo Akhriyey Go’aankooda ayaa sheegay in tirada Soomaaliya loo ogolaaday ay gaarayaan 11,500 oo Xaaji,isla markaana Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ay 3-dii Bishaan Apriil go’aamisay in Shirkadaha ka qeyb galaya tartanka inay ku Shaqeeyaan nidaamka Xablooyinka oo hoostagaya marsada ayna ka qeyb galaan tartan furan oo ku dhisan fursan loo siman yahay.
Sidoo kale waxa uu Suldaanka ka hadlay qodob ay xujeyda ka walacsanaayeem Xujeyda oo ah qiimaha,waxaana uu sheegay in qiimaha Xajka ee sanadkaan uu yahay $3600 oo Dollar halka qiimaha ugu sareeya ee vip-da ay tahay 5,000 oo Dollar.
Geba-gabadii waxa uu sheegay in tartankii la galay ee Shirkadaha ay ku guuleysteen 58 shirkadood,isaga oo soo bandhigay Magacyada Shirkadaha Diyaaradaha ee guuleystay.
Kormeerayaashii Wasaarradda Waxbarashada oo isaga baxay deegaannada Hirshabeelle